Mareykanka oo Syria ka sii joogi doona ciidamo ilaaliyo goobaha shidaalka ee Syria… – Hagaag.com
Mareykanka oo Syria ka sii joogi doona ciidamo ilaaliyo goobaha shidaalka ee Syria…
Posted on 27 Oktoobar 2019 by Admin in World // 0 Comments
Wasiirka Gaashaandhigga Mareykanka Mark Esper ayaa sheegay iney ciidamadooda ka howlgalayaan goobaha saliidda laga soo saara ee dalka Suuriya si ay uga difaacaan weerarada ururka IS uga iman kara.
“Ciidamada iyo dabbaabaadka Mareykanka in deegaannadaasi laga howlgeliyo waxaa looga baahday, si ay goobahaasi gacanta ururka daacish ugu dhicin” ayuu yiri wasiirka Gaashaandhigga.
Madaxweyne Trump inkasta oo uu horay u shegay inuu ciidamadiisa kala baxayo Suuriya, haddana hadalka ka soo yeeray wasiirkiisa Gaashaandhigga ayaa lagu tilmaamay inu muujinaya xaqiiqda dhabta ah uu Mareykanku ka damacsan yahay ciidamadiisa Suuriya ka jooga.
Dowlada Ruushka ayaa ku tilmaantay tallaabada uu qaaday Mareykanka in ay tahay boob la boobayo hantida dalka Suuriya isla markaana wey cambaareysay.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu mar sii horreysay sheegay in duullaanka uu Turkiga ku qaaday xudday Suuriya uusan ahayn mid lagu qaaday “xudduuddooda”, waxa uuna intaa ku daray in Kurdiyiintu oo xulufo la ahaan jiray mareykanka aysan ahayn “malaa’ig”.